Samsung Galaxy Note 9 wuxuu bilaabaa inuu helo beta-ka One UI 2 oo ku saleysan Android 10 | Androidsis
El Samsung Galaxy Note 10 wuxuu bilaabay helitaanka Android 2 oo ku saleysan One UI 10 dhawaan. Moodelkii ka horreeyay ee tan, kaas oo ah Galaxy Note 9Waxay umuuqatay inay heysato waxbadan kadib, bilaha soosocda, laakiin horeyba waxaa loo soo sheegay in OEM ay bilawday inay sii deyso cusbooneysiinta ku dareysa qalabkan foomka beta ee loogu talagalay dadka isticmaala ee ku biiraya barnaamijka.
Cusboonaysiinta waxaa la soo dejisan karaa oo keliya haddii aad haysato barnaamijka Xubnaha Samsung, kaas oo ah kan siinaya marin u helkeeda soo dejinta, kuna biira barnaamijka One UI beta.
Maskaxda ku hay in haddii aad rabto inaad hesho qalabkan cusub, ma noqon doontid dhibaato la'aan. Ahaanshaha nooca beta (tijaabada), hubaal in ka badan hal qalad ama dhibaato ayaa ka soo bixi doonta shaqadeeda, inkasta oo ay u badan tahay inaysan halis ahayn, in kasta oo ay tahay wax laga xumaado, maadaama ay sababi karto in codsiyada qaarkood aysan si sax ah u shaqeyn ama dhibaato kale. Tani waa waxa Samsung masuuliyad ahaan kula taliya.
Ka hor intaadan bilaabin soo dejinta xirmada qalabka iyo rakibida, waxaan kugula talineynaa inaad heysato taleefanka heer batteri heerkiisu wanaagsan yahay kuna xiran shebekad xasilan oo deg deg ah Wi-Fi, si looga fogaado nooc kasta oo guuldarro ah inta lagu gudajiro hawsha isla markaana aan loo lumin xirmada macluumaadka bixiyaha qaab aan loo baahnayn.
[VIDEO] Isbarbardhiga qoto dheer ee Samsung Galaxy S10 + vs Galaxy Note 10 +: duel of kings
ka Samsung Galaxy S9 iyo S9 Plus Iyagu waxay ku xigaan safka ku qoran si ay u helaan Android 10 beta oo ka hooseeya One UI 2. Tani waa in la helaa usbuuca soo socda ee adeegsadayaasha Kuuriyada Koofureed, Jarmalka iyo Mareykanka. Xaqiiqdii goor dambe, moodello kale oo ka soo baxa buug-gacmeedka Kuuriyada Koofureed ayaa lagu qori doonaa si loo helo cusbooneysiinta oo markaa looga faa'iideysto is-dhexgalka adeegsadaha cusub ee la hagaajiyay
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung Galaxy Note 9 wuxuu bilaabaa inuu helo beta-ka One UI 2 oo ku saleysan Android 10
Microsoft waxay tijaabisaa isdhexgalka shabakada Muuqaalka ee Gmail, Google Drive iyo Google Calendar